Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Na -agbasa Akụkọ Mba Nile » Akụkọ gbasara Jamaica » Expedia hụrụ uto dị egwu maka Jamaica
Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Caribbean • Akụkọ Ọchịchị • Industrylọ Ọrụ Ọbịa • Hotels & Ebe ntụrụndụ • Akụkọ gbasara Jamaica • News • Tourism • Mmelite nke Njem njem
Nzukọ Jamaica na Expedia
Ndị isi ụlọ ọrụ na Expedia Inc., ụlọ ọrụ na -ahụ maka njem ịntanetị n'ịntanetị kachasị n'ụwa na nnukwu onye na -emepụta azụmahịa njem nlegharị anya maka Jamaica, mesiri Minista Njem Nleta, Hon. Edmund Bartlett, na ndị isi ndị ọzọ na "data ha na -egosi n'ụzọ doro anya ime ụlọ abalị na mmụba ndị njem yana metrik abụọ karịrị otu oge na 2019." Ha kwukwara na United States of America ka bụ ahịa mmalite nchọta kacha elu maka Jamaica.
Emere ngosipụta nyocha data nke ukwuu na ọfịs ụlọ ọrụ Expedia Inc. na Miami, Florida, ụnyaahụ, Mọnde, Septemba 27, 2021.
Ọ bụ ezie na enwere nchegbu metụtara COVID-19, ntụkwasị obi nke ndị nwere mkpa njem nlegharị anya na US maka uto na Jamaica ka siri ike.
Jamaica gara n'ihu na -akwado nchekwa nke okporo ụzọ resilient.
Ozi nnabata a na-abịa n'agbanyeghị agbada ngwa ngwa njem ụwa niile sitere na mgbasa nke Delta variant nke COVID-19 na nsogbu ndị metụtara ya. Nkwụsị ahụ emetụtala nke ọma Ngalaba njem nlegharị anya nke JamaicaOtú ọ dị, a na -enwewanye ntụkwasị obi na ọnọdụ ahụ ga -aka mma n'oge na -adịghị anya.
Bartlett kwuru, sị: “Ka ọ dị ugbu a, ntinye aka anyị na ndị metụtara njem nlegharị anya na United States dị mma. Enwere nchegbu metụtara COVID-19, agbanyeghị, ntụkwasị obi maka uto maka Jamaica ka na -agbasi ike. Anyị ga-aga n'ihu na-ahapụ ihe ọ bụla na ohere ma mee ka nchekwa nke Resilient Corridors, nkwalite anyị na ụzọ karịa ọnụego ịgba ọgwụ mgbochi COVID-19 n'ofe mpaghara njem na eziokwu dị mfe na Jamaica bụ ebe kachasị mma maka ezumike na Caribbean. ”
Onye minista na-ahụ maka njem nleta na Jamaica Hon. Edmund Bartlett
E gosipụtara ngosipụta nyocha data nke ukwuu na ọfịs ụlọ ọrụ Expedia Inc. dị na Miami, Florida na Mọnde, Septemba 27, 2021. Onye isi oche nke Board Jamaist Tourist Board, John Lynch sonyeere Bartlett; Onyeisi njem nlegharị anya, Donovan White; Senior Strategist na Ministry of Tourism, Delano Seiveright na osote onye isi njem nlegharị anya maka America, Donnie Dawson. Ntinye aka Expedia bụ otu n'ime ọtụtụ nzukọ ya na ọtụtụ ndị isi ụlọ ọrụ njem, gụnyere nnukwu ụgbọ elu, Lines na ndị ọchụnta ego, n'ofe nnukwu ahịa Jamaica, United States na Canada. A na -eme nke a iji mee ka ndị bịarutere ebe a na -abịa n'izu na ọnwa ndị na -abịanụ, yana, iji kwalite itinye ego na mpaghara ndị njem.
Expedia Inc. bụkwa ụlọ ọrụ njem kacha atọ na US, yana ụlọ ọrụ njem nke anọ kacha ibu n'ụwa. Webụsaịtị ya, nke bụ ndị nchịkọta njem njem na injin metasearch njem, gụnyere Expedia.com, Vrbo (nke bụbu HomeAway), Hotels.com, Hotwire.com, Orbitz, Travelocity, trivago na CarRentals.com.